Ireo fianakaviana sahirana no niompy ity biby ity. Voalaza fa tsy vita fanefitra tamin’ny haromotana ilay amboa ka nahiana tamin’ny fahasalaman’ireo lasibatra. Mpivarotra manan-katao no ankamaroan’ireo niharam-boina novazanan’ilay alika. Ankoatra ny famonjena teo no ho eo tahaka ny fanapotsirana ny ra hivoaka sy ny fanasana savony avy hatrany ny ratra ary ny fifehezana ny lalandra tsy ho tonga any amin’ny fo sy hipariaka any amin’ny atidoha hitondra ny valanaretina dia nentina nihazo haingana ny ivontoeram-pitsaboana izy ireo. Ireo sendra ny mpanao gazetinay no nilaza fa avotra soamantsara ireo niharam-boina. Niteraka savorovoro teo anatin’ny renivohitr’Antananarivo ity kaikitra kivindro ity. Maro tokoa ireo alika no mirenireny eto an-drenivohitra izay heverina fa manan-tompo ihany izy ireny. Efa nisy fotoana nampiasana poizina namonoana azy ireny ary tsikaritra fa maro tokoa ny alika mirenireny. Amin’izao firohotan’ny tsy fandriampahalemana izao anefa ilaina ho famoha-mandry ireo biby tongotr’efatra mpivovo ireo hiomanana amin’ny tranga. Volana vitsy no nanatanterahina ny vaksiny maimaimpoana ho an’ny biby fiompy ho fiarovana amin’ny haromotana, fantatra anefa fa tsy nazava ny toerana isam-pokontany nalehan’ireo mpitsabo biby ka maro no tsy nahavita ny vaksinin’ny saka sy ny alikany.